Xog lama filaan ah oo kasoo baxeysa Waxyaabihii saarnaa gaadhigii loo adeegsaday qaraxii Zoobe. – Xeernews24
Xog lama filaan ah oo kasoo baxeysa Waxyaabihii saarnaa gaadhigii loo adeegsaday qaraxii Zoobe.
19. Oktober 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Warar dheeraad ah ayaa waxa uu kasoo baxayaa weerar argagixiso oo maalmo un ka hor ka dhacay Isgooyska Zoobe ee magaalada Muqdisho.
Weerarka oo loo adeegsaday gaadhi nooca loo yaqaan TM, ayaa waxaa la xaqiijiyay in laga soo buuxiyay kiimiko halis ah oo horay loogu haligay ummado badan oo muslim ah.
Qaraxa ayaa la sheegay in lagu daray kiimikada Nugleeyrka oo la rumeysan yahay inay galis galisay nolosha malaayiin shacaba oo ku nool dalalka Syria iyo Ciraaq.
Mid kamid ah Saraakiisha reer galbeedka ee ku sugan magaalada Muqdisho, isla markaana baadhay waxyaabaha loo adeegsaday Qaraxa ayaa sheegay in kiimikada loo adeegsaday Qaraxa ay kamid aheyd Nugleeyrka, waxa uuna tilmaamay in sidoo kale loo adeegsaday sun kale oo la dagaalanta nolosha.
Waxa uu tilmaamay in kiimikadaas lagu cabeeyay baco gaara oo loogu tallo galay, isla markaana leysku xidhay iyadoo loo adeegsaday Qaraxa.
Sidoo kale, Sargaal ka tirsan ciidamada AMISOM oo ku takhasusay kiimikada, laguna magacabo Col. Teeri Yuwanga ayaa sheegay in kiimikada loo adeegsaday Qaraxa ay qeyb ka tahay nuucyada dhalisa ololka iyo kuwa nabadguurka.
Waxa uu tilmaamay in baadhitaan fog ay u baahan tahay kiiska Qaraxa, waxa uun Col. Teeri Yuwanga cadeeyay in Qaraxaasi uu ka halis badnaa Qaraxyadii horay uga dhacay dalka Soomaalia.
Sidoo kale, waxa uu Col. Teeri Yuwanga carab dhabay in diyaarinta Qaraxaasi uu qaatay ugu yaraan laba asbuuc, maadaama uu yidhi kiimikada ay halis badan tahay.
Si kastaba ha ahaatee, Dowlada Federaalka ayaa xaqiijisey in 276 qof ay u geeriyooden qaraxii 14ka October 2017 ka dhacay isgoyska Zope ee KM5 ee magaalada Muqdisho, dhaawacana ilaa 300 oo isbitaalada magaalada la kala geeyey.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/10/chemie.jpg 222 227 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-10-19 09:06:492017-10-19 09:06:49Xog lama filaan ah oo kasoo baxeysa Waxyaabihii saarnaa gaadhigii loo adeegsaday qaraxii Zoobe.
Nooca qarixii Zoobe, halka uu ku socday, iyo sababta Shabaab u sheegan waay... Dhageyso: Madaxweynaha Jabuuti oo ka hadlay fashilka Alshabaab ka raacay Qaraxii...